Arsenal Waa Kooxda Kaliya Ee U Qalanta In Ay Caasimada London Ku Ciyaarto-Xidig Gunners Ka Tirsan Oo Chelsea & Tottenham Quudhsaday. - Gool24.Net
Arsenal Waa Kooxda Kaliya Ee U Qalanta In Ay Caasimada London Ku Ciyaarto-Xidig Gunners Ka Tirsan Oo Chelsea & Tottenham Quudhsaday.
Magaalada caasimada England u ah ee London ayaa ka mid ah magaalooyinka ay kooxaha ugu badan ee kubbada cagtu ka dhisan yihiin, laakiin mid ka mid ah ciyaartoyda Arsenal ayaa aaminsan in kooxda kaliya ee u qalanta in ay London ku ciyaartaa in ay tahay kooxdiisa Gunners.
Goolhayaha kooxda Arsenal ee Bernd Leno ayaa quudhsaday kooxaha waa wayn ee Chelsea iyo Tottenham kadib markii uu ku dooday in kooxdiisa Gunners tahay kooxda kaliya ee u qalantay in ay London matasho.
Arsenal ayaan waligeed ku soo guulaysan koobka kooxaha Yurub ee Champions league inkasta oo kooxda ay xifiltamaan ee Chelsea ay koobkan hal mar ku soo guulaysatay balse goolhaye Leno ayaan Blues u arkin in Arsenal la barbar dhigi karo.
Dhinaca kale Tottenham ayaa sanadihii ugu danbeeyay si wayn uga soo saraysay kooxda Arsenal balse taasi ma aha wax Leno uu u arko in ay tahay in Gunners lagu barbar dhigi karo Spurs.
Inkasta oo mudadii uu goolhaye Bernd Leno joogay kooxda Arsenal ayna wax badan oo la sheegi karo samayn, haddana waxa uu wargayska Sport Bild ee dalkiisa Jarmalka uu u sheegay in ayna jirin koox London ka dhisan oo Gunners la barbar dhigi karaa.
Goolhaye Bernd Leno oo hadalkan muranka dhaliyay sheegaya ayaa yidhi: “Ma barbar dhigi kartid, dabcan Arsenal koox aduun ayay u tahay kooxaha halkan London”.
Laakiin goolhaye Leno ayaan hadalka muranka dhaliyay intaas ku joojin wuxuuna soo qaatay magacyo gaar ah isaga oo yidhi: “Maya Chelsea, Maya Tottenham, Arsenal waa kooxda halkan ee aduunka oo dhan”.
Haddii uu Leno hadalkan sheegay iyada oo kooxdiisu ayna meel fiican ku jirin taas lafteeda wuu xusay wuxuuna yidhi: “Micno ma laha halka aanu ku jirnaa, sidoo kale USA iyo Asia waxaa jooga taageerayaal badan oo Arsenal ah, meel kastaba”.
Taageerayaasha Chelsea iyo Tottenham ayaa la filayaa in goolhaye Leno ay ugu maadsan doonaan in kooxdiisa Arsenal ayna xataa xili ciyaareedkan ku jirin tartanka Champions League inkasta oo uu isaga laftiisu tilmaamay in ayna micno lahayn halka ay hadda ku jiraan.